Amasondo enkomishi yedayimane Abakhiqizi Nabaphakeli | China Diamond indebe amasondo Factory
7 intshi T Shape Segment Isondo Lokugaya Lokhonkolo
7 inch T-Segment Cup Wheel Wheel RIDGID enziwe ngempushana yedayimane ye-Hi-Grade enebhondi yobunikazi eyakhelwe ukusebenza okuphezulu kokusika. Idizayinelwe ngamasegimenti e-turbo yokugaya okunolaka, ukulinganisa nokususwa kukakhonkolo. Ukuze usebenzise ama-engeli grinders.
Isondo lenkomishi yedayimane elingu-180mm elinamasegimenti e-rhombus
Okokugaya ukhonkolo, igwalagwala eliqinile, imabula, itshe lobunjiniyela, njll. Amasondo okugaya inkomishi yedayimane aklanyelwe ukugaya okomile, ukulinganisa nokubumba Okufanelekile ukulungiswa kwendawo. Ifanele ukugaya, ngesivinini esisheshayo nempilo enhle.
5 inch turbo grinding cup wheel kakhonkolo namatshe
Isondo lenkomishi yedayimane le-Turbo lisetshenziswa kakhulu ukugaya izinhlobo zokhonkolo omahhadlahhadla. Amasondo enkomishi ahambisana ne-angel grinder kanye ne-floor grinder. Ngokusebenza okuphezulu kokugaya, isondo lokugaya idayimane le-turbo belingeke liqhume noma liphule izifunda ngenkathi ligaya. Ukuphila okude nokusebenza okuzinzile.
5 intshi PCD Cup Wheel for Epoxy, Glue, Paint Ukususwa
Isondo lokugaya inkomishi yedayimane ye-PCD lisetshenziselwa ukususwa kwe-coating ehlukahlukene njenge-epoxy, iglue, i-mastic, i-acrylic, izinsalela zokunamathisela kanye ne-screed. Ngeke ilayishe noma igcobe okokunamathela njengesondo lenkomishi yedayimane.
150mm Isondo Lokugaya Inkomishi Ye-Hilti Yephansi Lokhonkolo
Idala isiphetho esibushelelezi kusetshenziswa ingxube yedayimane ehuqekayo. Iklanyelwe ukuthi ihlale isikhathi eside - ikusiza ukuthi wenze okwengeziwe ngesondo lenkomishi elifanayo. Ukudlidliza okuphansi - ubuchwepheshe bokulinganisa obusezingeni eliphezulu bukusiza ukuthi ugcine ukulawula okuqinile kwe-engeli grinder. I-Turbo rim - iklanyelwe ukugaya ngokushesha.
125mm Umcibisholo Amasegimenti Amasondo Endebe Yokugaya Ukhonkolo Yedayimane
ingxenye yomcibisholo isondo lenkomishi yokugaya idayimane akhiwe ngezimpushana zedayimane zezimboni zezinga eliphezulu ukuze kusebenze ukugaya okuphezulu nokuphila okuphakeme. Amasegimenti ethu okugaya akhiwe ngokukhethekile ahlinzeka ngokusebenza kahle okukhulu ngenani eliphansi kakhulu esondo lokugaya inkomishi.
7 Intshi Metal Bond Concrete Grinding Cup Wheel
Lolu hlobo lwesondo lenkomishi yokugaya idayimane elinamasegimenti angama-3pcs amakhulu agobile lunikeza inzuzo ehlukile yejubane lapho ugaya ukhonkolo. Uma kuqhathaniswa namanye amasondo enkomishi anamasegimenti ogqinsi angu-5mm, lezi zingxenye zobude obungu-10mm zinikeza ukuphila kokugaya okuningi kakhulu.
7 Intshi Umcibisholo Segments Diamond Ukugaya Cup Wheel For Concrete Grinder
Isondo Lomcibisholo Wendebe lisetshenziselwa ukususa ukunamathela okuncane nokulungisa indawo. Idizayini yamasegimenti inikeza isegimenti ngayinye ngokuthintana kwendawo ephezulu futhi ivumela u-opharetha ukulawula okwengeziwe ngamathuba amancane okumba phansi.